Fonony 5 an'ny The New Yorker ho an'ny coronavirus sy ireo andro manan-tantara | Famoronana an-tserasera
Ny New Yorker dia ao amin'ny ligy hafa miaraka amin'ireo fonony ireo izany dia maneho tsara ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao manerantany. Ny fomba fijerin'ny tsirairay amin'ireo fonony izay zarainay avy amin'ireo andalana ireo dia hanompo tanteraka hanehoana ny tantaran'ireo andro ireo amin'ny ho avy.
Ary tsy ny hafatra na ny antony manosika ihany, fa ny haavon'ny kanto ho an'ny tsirairay. sahala amin'ny herim-pony ihany. Indrindra rehefa hitantsika ny an'i Donald Trump izay anehoany ny tsy fahalalana sy ny avonavona nisy ny hafany tamin'ny fiandohan'ny volana martsa.
Manomboka amin'ny Donald Trump's voalohany ary izany dia mampiseho amin'ny fomba tonga lafatra ny fomba nandraisana ny hafatra COVID-19. Tsy misy zavatra mila ampiana intsony, satria ny sary dia maneho ny zava-drehetra. Saron-tava hanajamba ny fijerin'ny filoham-pirenena amerikana.
Ary miaraka amin'ny mena dia milalao hatramin'ny The New Yorker ka hatramin'ny ampiasao ny trano tsirairay manodidina ny olona iray mamorona ny sarin'ny coronavirus. Fonon-kery lehibe ho an'ny loko ampiasaina sy hanehoany ny halaviran'ny fiaraha-monina amin'ny fomba fijery hafa; raha ny tena izy afaka manakaiky kokoa ny hopper isika hitsena ny sary hosodoko avy amin'ny lafiny hafa.
Ireto ny manaraka gara misy angano any New York ary tsy iza izany fa ny Grand Central Terminal. Hita ho foana tanteraka izany amin'ny vidin'ny mpanadio izay irery irery.
Ity fonosana hafa an'ny The New Yorker ity dia mitondra antsika amin'ireo lalantsara amin'ny hopitaly miaraka amina mpitsabo mpanampy iray eny an-tànany ny finday misy fifandraisana video. Ity dia ho an'ny mararin'ny coronavirus izay manantena ny hahita ny havany alohan'ny vaovao mahatsiravina.
Ary miafara amin'ny ilay toerana rava amin'ny tanàna toa an'i New York amin'ny alina ary mitondra entana any an-trano ilay lehilahy mpanatitra. Sarona dimy ho an'ny seho dimy sy ireo fotoana dimy ao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay hidina amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny fonony an'ny The New Yorker dia mampiseho tsara hoe inona ireo andro COVID-19 ireo